Tababare Arteta Oo Amaanay Xiddigan City Ka Tirsan Kahor Kulanka Addag Ee Berrito Dhexmaraya Labada Koox – Garsoore Sports
Tababare Arteta Oo…
Tababare Arteta Oo Amaanay Xiddigan City Ka Tirsan Kahor Kulanka Addag Ee Berrito Dhexmaraya Labada Koox
Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa ku calaamadeeyay Manchester City ‘kooxda ugu fiican Yurub’ kahor kulankooda berrito, wuxuuna sheegay in tababare Pep Guardiola uu gacanta ku hayo cayaarayahan Weyn oo uu ula jeedo Ilkay Gundogan, gooldhaliyaha ugu sarreeya kooxda xilli cayaareedkan.
Kooxda City ayaa haatan hoggaamineysa horyaalka Premier League-ga iyagoo 10 dhibcood oo nadiif ah ka sarreeya Manchester United iyo Leicester City oo kaalinta 2aad iyo 3aad ku jira waxayna joogteeynayaan rikoor 17 kulan oo xiriir ah oo aanan laga adkaan tartamada oo dhan iyagoo isku diyaarinaya safarkooda xiga marka ay booqanayaan Waqooyiga magaalada London si ay kooxda Arsenal marti ugu noqdaan garoonka Emirates Stadium.
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa xariir addag la sameeyay tababare Pep intii lagu guda jiray 3dii sano oo uu u ahaa caawiye balse waa iney saaxiibtinimadooda dhinac iska dhigaan 90ka daqiiqo ee cayaarta berrito ay labadooda koox afka ciida isu dari doonaan.
Tababare Guardiola ayaa door cusub ka cayaarsiiyay cayaaryahan Ilkay Gundogan taas oo dhalisay natiijoooyin la yaab leh oo kooxda iyo xiddiganba ay ku horrumareen iyadoo uu 11 gool ka dhaliyay horyaalka xilli cayaareedkan.
Inkastoo safashada Gundogan uu shaki ku jiro kulanka axadda sababo la xariira dhaawac yar oo gumaarka ah, Arteta ayaa hoosta ka xariiqay fikirkiisa ku aadan qaab cayaareedka Gundogan ee goolka hortiisa, waxaana uu ku jawaabay: “waxaan u malaynayaa inuu haatan door sare ka cayaarayo kooxda. ‘isagu had iyo jeer wuxuu lahaa awooda uu ku yimaado diilinta ganaaxa wuxuuna leeyahay tayo fiican marka ay timaado dhammeystirka kubbadaha, ‘ door qoto dheer ayuu ka cayaarayay mana uusan heysan ruqsad uu ku dhalin karo goolal, waa cayaaryahan cajiib ah runtii, si aad iyo aad u wacan ayuu xilli cayaareedkaan u cayaarayaa”
Maxaa Ka Jira Wararka Sheegaya In Man City Ay Lacag Gaareysa £433 Milyan Usoo Bandhigatay Lionel Messi Si Uu Ugu Soo Biiro? – Jawaab Ayay Bixiyeen